Soo-saareyaasha Sifeeyaha Guriga oo Dhan - Shiinaha Shirkadaha Shirkadaha oo dhan & Shaybaadhka
5290 Backwash Karti Sare Nidaamka Sifeynta Biyaha Guri Kasta Oo La Isticmaali Karo
Nidaam sifayn biyo nadiif ah oo loogu talagalay guryaha la deggan yahay ama xafiisyada, gaar ahaan loogu talagalay in laga soo qaado waxyaalo waaweyn oo biyaha ka mid ah, in laga ilaaliyo qalabka iyo tubbada qashinka.
Adeegso mesh birta ah si aad u yarayso dhagxaanta, miridhku, ciidda, wasakhda, algae, kolloids, dixiriga cas, iwm.
316 mesh bir bir ah oo heer-caafimaad ah ayaa xaqiijin kara saxsanaanta iyo waxqabadka sifeynta wanaagsan.
Guryeynta laga sameeyay polymer waxay ka hortagi kartaa qarxinta iyo qaboojinta.
Waxtarka sare leh socodka biyaha ee 3 tan saacadiiba (cadaadis gaaraya 0.3MPa).
5676 Waxtarka Sare ee Nidaamka Sifaynta Biyaha Guriga Oo Dhan
Waxtarka sare leh socodka biyaha ee 3 tan saacadiiba.
5762-PF5A Waajibaad Culus oo Dib Loo Isticmaali Karo Guriga Nadiifiya Biyaha Oo dhan
Nidaam sifayn biyo nadiif ah oo loogu talagalay guryaha la deggan yahay ama xafiisyada, gaar ahaan loogu talagalay in laga soo qaado walxaha waaweyn ee biyaha, laga ilaaliyo qalabka iyo tuubbada qashinka.
Ku habboon yahay 4.5 "× 10" PP / warqad jilicsan / miiraha boogta si loo yareeyo dhoobada, miridhku, ciidda, wasakhda, algae, colloids, gooryaanka cas, iwm.
Astaamo aad u adag oo NSF-shahaado guryaha filter kaydadka
Qiyaasteena guud ee 4.5-ka ah ee lagu beddelo shaandhada si gooni ah ayaa loo iibin karaa ama waxay ula imaan kartaa nidaamka.
5766 Heerka Shaqada Dib Loo Isticmaali Karo Guryaha Nadiifiyaha Biyaha Guri oo Dhan
Ku habboon yahay 2.5 "× 10" PP / warqad jilicsan / miiraha boogta si loo yareeyo dhoobada, miridhku, ciidda, wasakhda, algae, colloids, gooryaanka cas, iwm.
Kaydadka shaashadda beddelka ah ee guud ahaan 2.5-ka ah ayaa si gooni gooni ah loo iibin karaa ama ula imanayaa nidaamka.
5450 Nidaamka Sifeynta Biyaha Dhexe
Hel biyo nadiif ah oo caafimaad qaba si loo yareeyo wasakhda biyaha ee cabitaanka guriga, karinta, qubayska, dharka iyo waxyaabaha kale ee loo baahan yahay.
Waxay isticmaashaa kaarboon qolof qumbaha iyo KDF qiimo sare si ay si hufan ugu sifeeyaan koloriin haraaga, bir culus iyo sun kale oo aan loo baahnayn.
Waxyaabaha ku jira heerka cuntada waxay xaqiijinayaan amniga iyo caafimaadka qaybaha qoyan.
Waxay qaadataa hal-taabasho hal-marin qaab-dhismeedka baasaska ah si loogu oggolaado beddel bilaash ah inta u dhexeysa biyaha la sifeeyo iyo biyaha tuubada.
5451 Nidaamka Sifeynta Biyaha Dhexe
5460 Degenaanshaha Jirka Dhexe ee Biyaha
Wuxuu adeegsadaa cusbada ion-sarrifka si uu si wax ku ool ah ugu nadiifiyo ion kaalshiyamka iyo magnesium-ka si loo helo dareen biyo ah
Wuxuu qaataa hal-taabasho qaab-dhismeedka baasaboorka ah si loogu oggolaado beddelaad bilaash ah inta u dhexeysa biyaha jilicsan iyo biyaha tuubada.
Kuu ogolaanayaa inaad la qabsato goobaha adag ee biyaha si waafaqsan baahidaada.
5461 Degenaanshaha Jirka Dhexe ee Biyaha
Kaydadka Filter Farxadda leh
Lagu rakibay tuubada tubada lagana ilaaliyo qalabkaaga biyaha iyo tuubooyinka biyaha nadiifka ah gurigaaga oo dhan.
La qabsi adag oo ku habboon dhammaan noocyada kala duwan ee nidaamyada sifeynta biyaha guryaha oo dhan.
NSF iyo WQA waxay caddeeyeen inay ka saaraan wasakhda inta badan laga helo biyaha, oo ay ka mid yihiin qashin, ciid, wasakh, miridhku iyo waxyaabo kale oo waaweyn.
Midabada koofiyadaha dhamaadka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahidaada.
Boogta Dhaawac Dhammaan Guryaha Beddelka Universal
Khaanadaha shaandhada waxaa lagu heli karaa cabbirro kala duwan iyo qiimeynno yaryar.
Sifeeyaha Guriga oo Dhan PP Meltblown Filters
Guluubyada shaandhada waxaa lagu heli karaa cabbirro kala duwan, qiimeynno yaryar iyo daaweyn dhamaadka (lakab, jeexdin, iwm.)
Kaydadka Beddelaha Filterka Biyaha, Sifeeyaha Biyaha Guriga Oo Dhan, Sifeeyaha Biyaha Gudaha, Nidaamka Sifeynta Biyaha ee Osmosis ugu Fiican, Nidaamka Osmosis ee Guryaha oo Buuxda, Isticmaalayaasha Daaweynta Biyaha,